Molluscum Contagiosum (ငါးမျက်စိ) - Hello Sayarwon
Molluscum Contagiosum (ငါးမျက်စိ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Molluscum Contagiosum (ငါးမျက်စိ)
Molluscum Contagiosum (ငါးမျက်စိ) ကဘာလဲ။
Molluscum contagiosum ဆိုတာ အရေပြား အပေါ်ဆုံးအလွှာတွင် virus ပိုး ကူးစက်ခံရခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ ၎င်းဟာ အနီရောင် သို့ ပုလဲလုံးကဲ့သို့ အဖုလေးတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုလျှင် ၎င်းအား လိင်ဆက်ဆံရာမှ ကူးစက်သည့်ရောဂါ (STD) လို့ခေါ်ပါတယ်။
Molluscum Contagiosum (ငါးမျက်စိ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
molluscum contagiosum က ကလေးငယ်တွေ (ယောင်္ကျားလေးတွေ) နဲ့ လူငယ်ပိုင်းတွေမှာ အတော်အသင့်လောက် အဖြစ်များပါတယ်။ လူကြီးတွေကတော့ molluscum contagiosum ကို လိင်ဆက်ဆံရာကနေ အများဆုံးကူးစက်ကြပါတယ်။ တခြားအဖြစ်များတာတွေကတော့ ကိုယ်ခံအားစနစ် ဆားနည်းနေသူတွေနဲ့ တခြားကူးစက်ရောဂါရှိသူတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Molluscum Contagiosum (ငါးမျက်စိ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Molluscum contagiosum ကူးစက်ခံရလျှင် ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ များသောအားဖြင့် မျက်နှာ၊ မျက်ခွံ၊ လက်မောင်းအောက်၊ နှင့် ပေါင်ခြံတွေမှာ အဖုသေးသေးလေးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ လက်ဖဝါး၊ခြေဖဝါး နှင့် ပါးစပ်တွေမှာတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် မပေါ်တတ်ပါဘူး။
ဒီအဖုတွေဟာ ၂ – ၅ မီလီမီတာလောက်ရှိကြပြီး အလယ်မှာ အချိုင့်လေးပါရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သင်အဲ့အနာလေးတွေကို သွားမကုတ်၊ မဖဲ့ဘူးဆိုလျှင်တော့ crops လို့ခေါ်တဲ့ virus ပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်လာတဲ့ အဖုအတန်းလေးတွေပေါ်လာခြင်း၊နီခြင်း၊ရောင်ခြင်းတွေ မဖြစ်တတ်ပါဘူး။
Molluscum က မျက်ခွံတွေမှာပေါ်လာလျှင် ဘက်တီးရီးယားဟာ မျက်လုံးထဲဝင်နိုင်ပြီး Pink eye လက္ခဏာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။Mollluscum contagiosum ဟာ ရက်သတ္တပတ်အတွင်း သူ့ဘာသာ ပျောက်သွားတတ်ပြီး တခါတလေလည်း လနှင့်ချီပြီး ကြာတတ်ပါတယ်။ အမာရွတ်တော့ ချန်မသွားတတ်ကြပါဘူး။
Molluscum Contagiosum (ငါးမျက်စိ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Poxvirus ( ကြွက်နို့ပေါက်စေတဲ့ virus အမျိုးအနွယ်တူ ) ဆိုတဲ့ virus ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ virus ဟာ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်း၊ တခြားသူရဲ့ ရောဂါကူစက်နေတဲ့ အရေပြား သို့ ရောဂါကူးစက်နေတဲ့ အဝတ်အစား၊ အသုံးအဆောင်တို့နှင့်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် ပြန့်နှံ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်လဲ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
Molluscum Contagiosum (ငါးမျက်စိ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Molluscum contagiosis ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တွေ့ရှိရတာကတော့ ကိုယ်ခံအားစနစ်အားနည်းသူတွေနှင့် atopic dermatitis လို့ခေါ်တဲ့ အရေပြားရောဂါရှိတဲ့ ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆက်လက်သိရှိလိုသော အချက်အလက်များအတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ အမြဲတိုင်ပင် ဆွေးနွေးပါ။
Molluscum Contagiosum (ငါးမျက်စိ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ မေးခြင်း၊သွေးစစ်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု တွေလုပ်ပြီး ရောဂါအဖြေရှာပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအဖြေဟာ သွေးထဲမှာ ထူးခြားတဲ့ အမွှေးထူတဲ့ သွေးဖြူဥကို ရှာတွေ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ဆီသို့ လွှဲပြောင်းပါလိမ့်မယ်။
ရိုးတွင်းချင်ဆီကနေ biopsy ယူပါလိမ့်မယ်။ biopsy ယူတဲ့နေရာမှာ သွေးအထူးကုဟာ အနုကြည့်မှန်ပြောင်း အောက်မှာကြည့်ရှုလေ့လာဖို့နှင့် တခြားရိုးတွင်းချင်ဆီနဲ့ဆိုင်တဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ ရိုးတွင်းချင်ဆီကနေ ချင်ဆီနမူနာယူပါလိမ့်မယ်။
Molluscum Contagiosum (ငါးမျက်စိ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဒီအဖုလေးတွေဟာ သူ့ဘာသာပျောက်သွားတတ်ပတယ် သို့သော် တချို့တွေမှာ တခြားလူကို ဒီ virus မကူးအောင် သို့ တခြားကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ပြန့်နှံ့မှုမရှိအောင် တခါတရံ ကုသမှုတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ ကုထုံးတွေမှာ လေဆာမီးအသုံးပြုပြီး ခဲခြင် သို့ ခြစ်ထုတ်ခြင်းတို့ဖြင့် အဖုလေးတွေကို ဖယ်ရှားကြပါတယ်။
တခါတရံမှာ ဒီကုထုံးတွေကြောင့် အမာရွတ်တွေကျန်တတ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်တွေဟာ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ အရေပြားလိမ်းcream တွေနဲ့ အဖုတွေကို လိမ်းစေခြင်းဖြင့် ပျောက်စေနိုင်ပါတယ်။
အဖုအသစ်တွေပေါ်လာတိုင်း ကုသမှုတွေလဲ ပြန်လုပ်ပေးရပါတယ်။ လူတွေဟာ ဒီရောဂါကူးစက်မှုကို တစ်ကြိမ်ထက်မက ခံရနိုင်ပါသေးတယ်။ ညစ်ပတ်နေတဲ့ လက်ကိုင်ပုဝါ သို့ တခြားသူရဲ့အသုံးအဆောင်တွေကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်း သို့ ရောဂါပိုးရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေခြင်းများကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက molluscum contagiosis ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် molluscum contagiosum ကို ကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
• သင့်ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားထားတဲ့တိုင်း ကုထုံးတွေကို လိုက်နာပါ။
• လက္ခဏာတွေရဲ့ အခြေအနေပြောင်းလဲမှုနဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက် ရက်ချိန်းမှန်မှန်သွားပါ။
• ကူးစက်တဲ့နေရာကို တခြားမပျံ့နှံ့နိုင်အောင် အဝတ်၊ပတ်တီး စည်းခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။
• အဖုတွေမပျောက်မချင်း တခြားလူနဲ့ လက်သုတ်ပုဝါမျှသုံးခြင်း မပြုရ။
• အရေပြားပေါ်က အဖုတွေကို ကုတ်ပြီးတခြားနေရာလျှောက်ကိုင်တာတို့ မပြုလုပ်ပါနဲ့။ ဒီနည်းနဲ့ virus ပိုးပျံ့နှံ့နိုင်ပြီး တခြားဘက်တီးရီးယား ရောဂါကူးခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• တခြားသူတွေကို မကူးစက်နိုင်အောင် အများသုံး ရေကူးကန်၊ရေနွေးခန်း နှင့် ရေချိုးခန်းတွေကို အဖုတွေမပျောက်ခင် မသွားပါနဲ့။
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,2012. Print edition. Page 119
Molluscum contagiosum. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/molluscum-contagiosum/basics/definition/con- 20026391. Accessed Jul14 2016
Molluscum contagiosum. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000826.htm. Accessed Jul 14 2016Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,2012. Print edition. Page 119
Molluscum contagiosum. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000826.htm. Accessed Jul 14 2016